Ibsa labsii gumii abbootii gadaa oromiyaa ilaalichisee ibsa waraanaa Bilisummaa oromoo irraa – Kichuu
Ibsa labsii gumii abbootii gadaa oromiyaa ilaalichisee ibsa waraanaa Bilisummaa oromoo irraa
#Ibsa_labsii gumii abbootii gadaa oromiyaa ilaalichisee ibsa waraanaa Bilisummaa oromoo irraa
Dhiyeenya kana haala araaraa #ABO fi motummaa itiyoophiyaa gidduu jiru xumuruun nagaa buusuuf jedhu,waligahii magalaa Finfinneetti taa’e irratti waa’ee #WBO irratti ABON ummata oromoo fi abbootii gadaatti gaafatama laachuun isaa, murtii jajjabduuf aangoon ummata oromoo jajjabduu ta’uu agarsiisa.
Dhimmi araaraa fi nagaa ilaalchisee ummati oromoo ummata araaraa jaalatu, ABOnis isuma keessaa dhalate waan ta’eef araara jaalata. WBO ijaaruun kan feesiseef dirqamneeti malee jaalaneetii miti. Kayyoo bilisummaa fi walabummaa oromoo humnaan sarbamne deebisuuf wbon gana 45 oliif wareegama kumaatamaan lakkaawamu itti baasinne hari’a geenye. Ummati oromoo kaabaa kibbaatti, bahaa lixaatti ilmaan isaa hedduu itti gabaree dhiigaa fi lafeen utubee armaan ga’e. Hari’as sa’aa kanattis dachaan wareegama goso hedduu itti baasuutti jira. kanaaf ABOn qabeenya ummata oromoo handhuura isaati. Kanaaf gaafatami ol aanaan kan wbo ummata oromoo harka jira jechuu dha.
Gumiin abbootii gadaa oromiyaa fi ummata oromoo jedhame guyyaa 24 / 01 / 2019 murtii magaalaa Ambootti murtaa’e kun, haala qabsoon oromoo keessa darbe,wareegama ilmaan oromoo ilaaluu dhabuu fi haala mootummaa itiyoophiyaa fi opdon itti deemaa jirtu, xiinxaluu dhabuun, walumaagalatti haala duree dhimma ulfaataa kanaa ilaalicha keessa galchuu dhabuun araarri kun gufuulee adda addaa akka horatu taasiisee jira.
1. Abbummaa fi gaafatama ummati oromoo WBO irratti qabu, walgahii magaalaa Amboo irratti hin hirmaachifinne, deegartoota fi miseensonni Opdo fi Warreen wbo jiban, WBOn hin barbaachisu jechaa turan qofa adda dureen kessatti waan mul’ataniif
2. Rakkoon jiru rakkoo ABO fi itiyoophiyaa gidduu jiru osoo ta’uun beekkamu ,rakkoo oromoo fi oromoo jidduu jiruuti gad buusanii ilaaluun, dhimmaa oromummaa fi itiyoophiyummaa jidduu jiru aguuguun, wbon bultii 20 keessatti hiikatee akka galu murteessaan , haala duree waliigaltee bilchaataa tokko malee walabummaa ABO jaamsuun, fuuldura isaa dukanaa’aa akka ta’e agarsiisa.
Haala kanarratti qabxiilee armaan gadii ummati oromoo akka nuu hubatu barbaanna
1. Hooganoota ABO fi WBO wal_hanqisuun marii fi mala dhoowwuun maaliif barbaachise?
2. Bakka mootummaan itiyoophiyaa lola ummata oromoo fi wbo irratti lola labsee humna lafoo fi xiyyaaraan lolaa jirutti, hoogganoota ABO fi miseensota deegartoota fi qeerroo oromoo ajjeesaa, hidhaa fi Reebaa, doorsiisaa jirutti fi humna waraanan marsaa jirutti, wbo irraa hiikuuf jarjartii fi ariitiin kun maaliif barbaachise?
3 . Waltajjii araaraa ff fi Amboo irratti hirmaataan abbootiin gadaa Booranaa kan hin hirmaachisiniif, warroota deegartoota fi akitivistoota ofiin jedhan ilaalicha jibbaa WBOf qaban, quunnamtii qondaaloota wbo osoo hin qabatiin soba adii gumii agasi geessuu irratti shira dhiibbaa taasisuuf tattaafatuun maaliif. WBOn quunnamtii caasaa isaa malee hoogganoota dhaabbatu kan hin qabnne nami wbo waan dansaa isaatuu takkaa dubbatee hin beekinne, soba adii sobuun, wakabaa hagas gawu dhimma guddaa kanarratti maaf feesise? ?
4. Dhimma guddaa hagas gahu kana hiikadhu murtii ariitii, osoo wbo hin gaafatinii fi hin ilaaliin jarjartiin murtii kana kan kennan araaraa shiraan ummata oromoo dogoggorsuun wbo gargar baasuuf, kan saganteefatan ta’uu muli’isa
5.Dhimma araaraa kanarratti wbo gargaarsa qoodudhaaf WBON akka gandaan/godinatti ilaaluun qophaa qophaatti Manguddoo fi abbootii gadaa itti erguun jaallan qabsoo lubbuu isaanii tokkicha sabaa isaanii kennaan akka dhimma gandaa /godina after qabsaa’oti summii shira facaasuun gargar qoodudhaaf yaala jiru .
6 . murtii araaraa Ambootti labsaame irraa eegalee loli bal’aan WBOn dhihaa fi WBO kibbaa, gujii Lixaa fi bahaatti banaame jira
-G/Lixaa A/dugdaa dawwaatti halkan araaraa labsaame (24-01-2019)waraanaa rib murnaa murnaan bakka waraanni WBO jirutti marsuun lolli guddaan adeemsiifame olee hangaa guyyaa 27-01-2019 xiyyaaraan ganda meedaanoo irratti kaasuun lubbuu namoota hedduu fi qabeenyan badaa jiraa.
-guyyaa 25-1-2019 A/D/Dawwaa gandaa gooroo ballii namaa 6 qabuun 26 01 2019 namoota 6n ajjeesuudhaan
-guyyaa 27 01 2019 gandaa meedaanootti nama 3 ajjeesuudhaan qabeenya hedduu saamuun fi gubuun ittii fufee jira -A/qarcaa ganda Lamii hirbaatti jaartii tokko osoo isheen armaa duraa qabduu rib manatti galchuun mana waliin gubuun. Gochaalee godina kanaa keessatti kan qofaa osoo hin taane kanaa akka fknf kaasa. -g/gujii bahaati ergaa araaraa jedhamee loli guyyaa 5 magaaddoo, Adoolaa ,shakkisootti, saraansaritti lolli geggeefama ogaa jiru ummata keenya qulqulluu rib tin ajjeefaman, saamuu fi gochaalee suukaneessaa hedduu rib geggeessa jira.
-shawaa kaabaa fi lixaatti humnaa guddaan doorsisuu shororkeessa rib itti fufee jira.
-garaa Lixaa oromiyaa wallagga 4n fi illuu abbaaboor loli guddaan deemaa jira.
Hoggantota ABO ,miseensota fi deggeertota ABO hedduun hidhamaa ,doorsiifaama jiru .
Egaa labsin araaraa tif gochaan faallaa araaraa bifa kanaan geggeefama jira. Nuti wbo araaraa ni feenaa ni jaallan as. Food fedhan if xaanacha hin nyaataan jedha oromoon. Nuti wbon qamoota dhimma wbo aangoo fi gaafatami ol aanaan itti kenname waliin mari’achuun qophii dha. Garuu haalotin armaan oliitti ibsina akka gufuu guddaa ta’e ibsuu barbaanna.
Loon daraabadha (fooraa) yoo galchaa illee warra loon tiksu fi haala loonii akkasumas karaa inni irraa goodane galuu maraa fi mariin ta’aa.WBOn immoo kaayyoo fi akeekaa isaaf wareegama guddaa baasee maraa fi marii maal bultii 20 keessatti qawwee hiikatanii haa galaan jechuun waan fakkaatu miti.
Dhaamsi nuti ummata oromoof qabnu eega ABOn chaarteera bahe mootummaa xoophiyaa Gabrummaa ammayyaa diriirsuun akkuma mootummaa gabroonfataa Addunyaa kanarraa mirga xiqqoo safaaree kennuu mataa keetin of bulchiisaa, afaan keetin barata jechuun gowwoomsuun ABO irratti dulchiisa bahe. Shirri guddaan ABO balleessuudhaaf dirree qabsootis ergamtoota keessa fi alaan dhaluu qindaaye bara 2001 fi 2008 taasifame keessaatti warroota siyaasaa yoo dubbataa akka damma miyawuu bulee summiit ta’uu isaa diigaa uummata baroota kanaan duratti mul’ate ture. ABO fi WBO n qabeenya uummata oromooti.
Walumaagalatti ABO balleessuudhaaf shira alagaa fi firaa tin yaaliin guddaa taasifamuu, haala rakkisaa fi zaliili keessaati qabsoo had hooftu fi ofirratti ciisa WBO taasise guyyaa har’aa geenyee jira. Garboontan mirga xiqqoo nama kennuun yeroo dheeraafatu yoo shiri sunii irràatti beekame mirga xiqqoo nama dara, qabsichaa danquuf dhaabaa bilisummaa qabsaa’uu haala danda’u hundaan balleessuuf yaala. Mootummaan itiyoophiyaa ABO irraatti kanumaan raawwachaa jiraa. Kaleessaa gana 27 ofiin of bulchiin jedhee ukkaamsèe ammaas maqaa piraayi ministèriittiin Umurii dheefachuuf nu burjaajessaa jira, dhimmi ABO dhimma oromooti.Waan Kaleessaa darbeera waa barachuu qabna. Dhimmi WBO aangoof gaafatama ummata oromoof abbootii gadaa yoo kenamu kanaati akkuma Kaleessa dhimmi araaraa Ertiriyaatti jarjartii dhan raawwaatame, waa’ee labsii araara AMBOOTTI taasifame teesuma sa’aatti xiqaatiin murtiin darbee miseensoota ABO, deegartoota ABO fi waraana bilisummaa oromoo biratti baayyee waan nama yaaddesuudha ,kanaaf (1) irmaana ummata oromo mara bilchinaaf tasgaabbiin akka ta’u (2)qeerroo fi qeerritii bilisummaa oromoo wareegama ulfaataa Kaleessaa baftaan, hidhaa, doorsisaa ajjeechàan akka dubaati isin hin deebnee gaafatama ulfaataa siniirra jiru beetani nagaan dhimmi kun akka xumuramu gochuuf akka qooda keesaan isaa Kaleessaa akka baatan isiin gaafanna. (3)nutti miseensoon WBO nagaafatanii bakka olaanaa yoo keeninu, araaraa fi nagaan kun bifa ammaa deemaamu kanaan nagaaf araaraa fidu kan hin dandeenye ta’u isiin hubachiiftan. Walabummaa ABO kan sharafu gonkuum kan hin fudhaane ta’u mirkaneesina .kaayyoo Wareegama eddu itti baasne waregamaan akka tiksiinu cimsinee isiin beeksiifna. Kanaaf
1.koree araaraa keessatti jibbaa fi dinummaa wbo kan agarsiisa turan keessatti hin hirmaanna gaafanna
2.lollii wbo fi ummata oromoo irratti labsaame haa dhaabbatu
3 . murtii araaraa keessatti gaaffii leenjii wbo fi miseensonni ABO qabanii marii akka taasifamuu
4.lollii mootummaa nurratti godhu dhaabbate naannoo sochii wbo irraa akka buqqaa’an
5 . Hoggantota ABO, miseensota, fi deggeertota ABO akka gadhiifamu
6.gochaa suukaneessaa ummata keenya irratti raawwachaa jiru qaami walabaa akka qorattu
7.waajjiiroti ABO cufamaan akka banamuu